How Do You Think on Your Work?? | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Some Suggestion for WordPress Start
Making WordPress BLog →
November 6, 2007 · 3:42 am
How Do You Think on Your Work??
စွမ်းရည်မြင့်မားခြင်းမှ ကြီးကျယ်ပြောင်မြောက်ခြင်းသို့ ကို ရေးထားတာ အပိုင်း ၉ အထိပြီးပါပြီ။ ကိုးပိုင်းစလုံးကို Article ဆိုတဲ့နေရာမှာ PDF ဖိုင်နဲ့ တင်ထားပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်အသစ်ကနေ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ ဆက်တင်သွားပါမယ်။
ယနေ့ခတ် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကြီးစိုးနေသော အရာဝတ္ထုပုံစံထိန်းချုပ်မှု ပါရာဒိုင်းနှင့် မန်နေဂျာများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများက ၀န်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့်ဆောင်ရွက် နိုင်မှု ဖော်ထုတ်မပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြား တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုကို ရှာကြည့်နိုင်သည်။ အဖြေက ရိုးရှင်းပါသည်။ လူများသည် ရွေးချယ်မှုများ လုပ်နေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်၍ ရသမျှ အခွင့်အရေးကိုဖမ်းဆုပ်ပြီး ဆောင်ရွက် လိုစိတ်ရှိမရှိပေါ်မူတည်၍ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ် ကိုယ်ဘယ်လောက်တာဝန်ယူမည် ဆိုသည်ကို သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ မသိလျက်ဘဲဖြစ်စေ လူတွေကဆုံးဖြတ်နေရသည်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါဆိုသည်မှာ ကာယ၊ စိတ္တ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏဟူသော လူ့သဘာဝ လေးရပ်စလုံးကို ဆိုလိုသည်။ ရွေးချယ် ခြင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်သော် မနာခံလိုခြင်းမှသည် ဖန်တီးစွမ်းဆောင် နိုင်မှု နိုးကြွလာခြင်းအထိ အဆင့်ဆင့် တွေ့ရသည်။
ရွေးချယ်မှုခြောက်ခုကို အစဉ်လိုက် ဖော်ပြရလျှင် မနာခံလိုခြင်း၊ ကိုယ် လွတ်ရုန်းလိုခြင်း(Rebel or Quit)၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘဲနာခံခြင်း (Malicious Obedience)၊ စိတ်ပါလက်ပါလေးစား လိုက်နာခြင်း (Willing Compliance)၊ တက်တက်ကြွကြွကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Cheerful Cooperation)၊ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ကဲ့သို့ စိတ်ကိုနှစ်မြှုပ်လုပ်ဆောင် ခြင်း (Heartfelt Commitment) သို့ မဟုတ် ဖန်တီးစွမ်းဆောင်နိုင်မှု နိုးကြွလာခြင်း (Creative Excitement) တို့ ဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်စရာအသီးသီးသည် အောက်ပါဖြစ်နိုင်ခြေငါးရပ်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမ-တရားမျှတမှုမရှိစွာ ဆက်ဆံခံရခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းတွင် ပါးနပ်သောကိုင်တွယ်မှုများစွာရှိခြင်း၊ ကိုယ့်လူကောင်းစားရေးဝါဒ (Nepotism) ရှိခြင်း၊ လုပ်ခလစာပေးရာတွင် မှန်ကန်မျှတမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်လုပ်သလောက် ခံစားခွင့်မရခြင်း စသည် တို့ရှိနေပါက မည်သည့်အပြုအမူကို ရွေးမည်နည်း။
ဒုတိယ-လုပ်ခလစာအားဖြင့် မျှတမှုရှိသည်ဆိုသော်လည်း လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းတွင် အနှိမ်ခံရသည်ဆိုပါစို့။ ရသင့်သောလေးစားမှုမရခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးတွင် တစ်ဖြောင့်တည်းမရှိမှု၊ တစ်ဖက်သတ်အာဏာရှင်ဆန်မှု၊ အပြောင်းအလဲလွယ်ခြင်း၊ အလုပ်ရှင်အကြီးအကဲ၏ မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ခြင်း စသည်တို့ရှိလျှင် မည်သည့်အပြုအမူကို ရွေးမည်နည်း။
တတိယ-လုပ်ခလည်း သင့်တင့်သည်။ ကောင်းမွန်စွာလည်း ဆက်ဆံခံရသည်။ သို့သော် ထိုသို့ပေးခြင်းသည် ကိုယ့်ဦးနှောက်ကို ဖောက်စားချင်သောကြောင့်ဟု ဆိုပါစို့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခံစားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး အသိပညာပိုင်းကို အလေးမထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် မည်သည့်အပြုအမူကို ရွေးမည်နည်း။
စတုတ္ထ-အပြင်ပန်းဟုဆိုရမည့် လုပ်ခလည်းမျှတသည်။ (Body) ဆက် ဆံရေးလည်းကောင်းသည်။ (Heart) အသိပညာပိုင်းကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု သည်။ (Mind) သို့သော် အပ်ကြောင်း ထပ်နေသည့်အလုပ်မျိုး (ဥပမာ-မည် သူမျှမကြည့်၊ အသုံးလည်းမ၀င်သည့် အစီရင်ခံစာများ အမြဲရေးနေရခြင်း)နှင့် သာ ဂျင်ဂျင်လည်နေသည်ဆိုပါစို့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်လုပ်သည့်အလုပ်မှာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဟု ခံစားနေခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ (Spirit) ထိုအခြေအနေမျိုး တွင်ရော မည်သည့်အပြုအမူကို ရွေးမည် နည်း။
ပဉ္စမ-လစာလည်း မျှမျှတတရသည်။ ဆက်ဆံရေးတွင်လည်း ချောမွေ့သည်။ အသိပညာကို အသုံးချပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ လုပ်ရသည်။ သို့သော် အခြားဝန်ထမ်းများအပါအ၀င် Customer များနှင့်Supplier များအကြား လှည့်စားမှု၊ မရိုးသားမှုများ သူ့ဘာသာသူ ဆက်ရှိနေသည်ဆိုပါစို့။ ဤအခြေ အနေတွင် မည်သို့တုံ့ပြန်မည်နည်း။
အထက်ပါဖြစ်ရပ်များတွင် ကာယ၊ စိတ္တ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏအားလုံး ပါဝင် သည့် တစ်ခုလုံး သက်ရှိသဘောဆောင် ပါရာဒိုင်း (Whole-person Paradigm) ကို အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်လာသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ ဤနေရာ၌ အဓိကအ ချက်မှာ လူ့သဘာဝအစိတ်အပိုင်းလေး ရပ်၌ တစ်ရပ်ကို လျစ်လျူရှုလိုက်သည် နှင့် လူကိုအရာဝတ္ထုကဲ့သို့ သဘော ထားရာရောက်သွားခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုပုံစံ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် လည် ပတ်မှုရှိရန် ထိန်းချုပ်မှု၊ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ရမှုတို့ လိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအခြေအနေ အမျိုးမျိုးရှိသည့်ဒေသများသို့ရောက်သွားတိုင်း စတီဖင်ကိုဗေးက အထက်ပါမေးခွန်း များကိုမေးကြည့်ခဲ့ရာ အောက်ဆုံးရွေး ချယ်မှုသုံးခုဖြစ်သည့် မနာခံလိုခြင်း၊ ကိုယ်လွတ်ရုန်းခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိဘဲနာခံခြင်း၊ စိတ်ပါလက်ပါလေးစား လိုက်နာခြင်းဟူသော အမျိုးအစားများ၌ သာအဖြေထွက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ယနေ့ အင်ဖော်မေးရှင်း၊ ပညာလုပ်သား ခေတ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံး၌ သက် ရှိကဲ့သို့မြင်ခြင်း၊ လုပ်ခထိုက်သင့်စွာရခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခြင်း၊ အသိ ပညာကို အသုံးချခွင့်ပေးခြင်း၊ ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများ ခံစားစေ ခြင်းတို့ရှိမှသာ အထက်ပိုင်းရွေးချယ်မှု သုံးခုဖြစ်သည့် တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကဲ့သို့ သဘောထားလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဖန်တီး စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနိုးကြွခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပေသည်။
ဤမျှဆိုလျှင်ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာများ၏ ကျောရိုးနှင့်လူ့သ ဘာဝနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပါရာဒိုင်းအတွင်း တည်ရှိနေသည့် အနှီပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရေးအဓိကအချက်ကို မြင်နိုင် ပါသည်။